Otu esi emepụta blog esi nri na usoro 3 | Usoro ọgwụgwọ
Otu esi emepụta blọgụ isi nri na usoro 3
Ị chọrọ mepụta blog nke gi ma i maghi ya? Ọ dị mma, echegbula, na Thermorecetas, anyị ga - enyere gị aka ịmepụta blọgụ nke isi nri site na 0 na 3 mfe nzọụkwụ nke ahụ dịịrị onye ọ bụla ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha enweghị ihe ọmụma ọ bụla gbasara ịntanetị ma ọ bụ teknụzụ.
Ihe mbu ichoro ime bulogia nri di họrọ ngalaba ị chọrọ iji. Ngalaba ahụ ga-abụ ihe onyonyo gị na akara na ịntanetị yabụ na ọ bụ isi okwu dị mkpa ma ọ bara uru itinye oge iji họrọ nke dị mma, ebe ọ bụ na emesịa ị nwere ike ịgbanwe ya mana nke ahụ bụ ọrụ gbagwojuru anya na ọ ga-adị mkpa maka ọkachamara iji nyere gị aka.
Họrọ ezigbo ngalaba maka blog gị bụ isi
Tipsfọdụ aro iji họrọ ezigbo ngalaba maka blog gị:
Họrọ aha nke bu mfe icheta, nke ahụ pụtara ihe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na aha gị bụ Sara ọ nwere ike ịbụ ihe dịka lasrecetasdesara.com ma ọ bụ ihe yiri ya.
Gbalịa mee ngalaba dị ka obere ka o kwere mee dị ka nke a ga-eme ka ọ dị mfe icheta.
Ọ lma ọ bụ karịa n'ụzọ doro anya dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na blog gị gbasara isi nri, mgbe ahụ ngalaba aha ga-eme ka onye ọ bụla gụọ ya mara na ọ bụ blog nchịkọta.
Gụnye Keywords n'ime ngalaba. Ọ bụrụ na blog gị gbasara desserts wee nwaa itinye okwu a "desserts" n'ime ngalaba gị, dị ka allmyposters.com ma ọ bụ ndị yiri ya.
Jiri .com ndọtị, ebe ọ bụ na ọ bụ mba kachasị eji mba ụwa eme ihe. Naanị ma ọ bụrụ na ịmee weebụsaịtị naanị maka Spain ị nwere ike ịhọrọ ndọtị .es mana ejirila ndọtị ma ọ bụ mgbatị na-esite na mba ndị ọzọ.
Ozugbo anyị nwere aha ahọpụtara, nzọụkwụ ọzọ ga-abụ deba aha ya n’aha gi. Lee nkwanye anyị bụ iji Godaddy, ebe ọ bụ otu n'ime nyiwe ahụ onyinye kacha mma na nkwa niile. Iji debanye aha ngalaba gị naanị ị ga-aga Pịa ebe a, tinye aha ị họọrọ (chọpụta nke mbụ na ọ dịghị, ebe ọ bụrụ na ọ dị adị ị ga-ahụ aha ọzọ) wee kwụọ ụgwọ ya.
Ọzọkwa ugbu a ị nwere onyinye pụrụ iche gịnị mere i nwere ike zụta ngalaba .com maka naanị € 0,85 site na ịpị ebe a
Nzọụkwụ iji zụta ngalaba
Na nseta ihuenyo na-esonụ anyị ga-ahụ nzọụkwụ site na nzọụkwụ ịzụta ngalaba na ikpo okwu Godaddy.
Nzọụkwụ 1 na 2
Tinye godaddy website, dee aha ngalaba ahụ wee pịa bọtịnụ ọchụchọ ahụ iji hụ ma ngalaba ahụ ọ dị ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ọ bụrụ na ngalaba ahụ dị mgbe ahụ ị nọ na chi. Ugbu a pịa bọtịnụ họrọ.
Pịa na bọtịnụ gaa n'ihu ụgbọ ịga n'ihu na usoro ịzụta.
Kwụpụ 5 na 6
indica ọnụ ọgụgụ nke afọ ị chọrọ ịzụta ngalaba (anyị na-akwado ọ dịkarịa ala afọ 2) wee pịa "gaba n'ihu ịkwụ ụgwọ". Site na ebe a, ị ga-edebanye aha na weebụ ma ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ahụ n'ụzọ dị mfe site na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ paypal.
Ma nke ahụ bụ ya. Ugbu a gịnị i nweela ngalaba zụtara anyị ga-ahụ nzọụkwụ ọzọ: nnabata.
Họrọ ezigbo nnabata
Ozugbo anyị nwere ngalaba, nzọụkwụ ọzọ ga-abụ zụta ezigbo nnabata. N'okwu a nkwanye anyị bụ iji ọrụ nke Netike Raiola nke bụ Spanish na-eweta nke na-enye ọrụ dị mma na ezigbo ego yana 100% nkwado na Spanish. Nweta weebụsaịtị Raiola ma were ndị ọbịa kacha mma pịa ebe a. Have nwere ezigbo nnabata site na 2,95 XNUMX kwa ọnwa!
Nzọụkwụ ịzụta nnabata
Dị ka ịzụta ngalaba, anyị ga-akọwa nzọụkwụ otu nzọụkwụ otu esi azụta ezigbo Bochum.
Kwụpụ 1 na 2
Tinye Raiola na ebe nrụọrụ weebụ na pịa na menu Nchịkọta> Bochum WordPress.
Họrọ atụmatụ nnabata ga-adabara gị mma. Lee nkwanye anyị bụ zụta atụmatụ maka € 6,95 kwa ọnwa n'ihi na ike dị oke ọnụ ahịa.
Kwụpụ 4, 5 na 6
Dee aha ngalaba ị zụrụ na mbụ maka weebụsaịtị gị. Na isi nke 5 ị ga-egosi na ịchọrọ ịwụnye WordPress (a na-atụ aro ka ị wụnye nsụgharị kachasị ọhụrụ) yana dịka usoro ikpeazụ ị ga-pịa bọtịnụ ahụ Hazie usoro. Site na ebe a, ị ga-emecha ndebanye aha dị ka onye ahịa ọhụrụ na ọ bụ ya.
Ozugbo ebe a, anyị azụworị ngalaba na nnabata ahụ.
Wụnye njikwa ihe ọdịnaya
N'otu oge, nzọụkwụ ọzọ ga-abụ wụnye njikwa ihe njikwa iji nwee ike ibipụta Ezi ntụziaka na blọọgụ gị. N'ebe a enweghi obi abụọ, nkwanye kachasị mma bụ WordPress, ngwa ọrụ ejikwa ọtụtụ blọọgụ ụwa yana nke anyị ji na Thermorecetas (Mara: WordPress nwere ike ịwụnye na akpaghị aka na nnabata nnabata nnabata, mana ọ bụrụ na anyị ga-agwa gị otu esi eme ya ma emechaa).
Iji wụnye WordPress na ntanetị ọhụrụ ị chọghị ihe ọmụma ọ bụla. Raiola nwere ngwa arụnyere na ndabara na-enye gị ohere wụnye WordPress na 4 dị mfe clicks. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ otú ị pụrụ ime ya, ebe a bụ a video na-akọwa dum usoro nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Chepụta blog gị
Ọfọn, anyị nwere blog gị fọrọ nke nta ka ọ dị njikere. Ugbu a ị chọrọ naanị nweta imewe na ị masịrị na ihe niile ga-agwụ. Mgbe ị na-achọ imewe anyị nwere nhọrọ abụọ:
Jiri a free imewe: WordPress nwere ọtụtụ narị atụmatụ aghụghọ ị nwere ike ịwụnye na blọọgụ gị ma bido iji ha. Aha oru ya bu isiokwu ma ị gha achoputa katalọgụ dum abanye na peeji a.
Jiri a ugwo imewe: Nke a ga - abụ nhọrọ kachasị atụ aro kemgbe obere ihe karịa dollar 40 anyị nwere ike ịnwe ụfọdụ atụmatụ ọkachamara maka blọọgụ anyị. Ọzọ m ga-egosi gị ụfọdụ.
WP Okwu maka Ezi ntụziaka
Ọ bụ ezigbo ọkachamara ọkachamara na n'ụzọ zuru oke kachasị maka blọọgụ uzommeputa. I nwere ike ibudata ya na $ 48 na ịpị ebe a.
Nri & Ntụziaka WordPress Okwu
Uzo ozo emere karia bido. Kedu ihe ọzọ adaba n'ụzọ zuru oke ka mobiles na mbadamba ya mere blọgụ gị ga-ama mma na ụdị ngwaọrụ ọ bụla. Ọ na-efu naanị $ 48 na can nwere ike ịzụta ya site na ịpị ebe a.
Ozugbo ị ruru ebe a, ị nwere blog gị na njikere naanị ịkwesịrị ịmalite ibipụta akwụkwọ nri mbụ.
Lee, anyị ga - enye gị aghụghọ ole na ole iji nweta ihe ịga nke ọma na weebụsaịtị ọhụrụ gị.
Kedu otu esi edozi blọgụ kichin na-aga nke ọma?
Nweta blog uzomme nke ọma!
Foto dị mkpa na nri blog. O nweghi ihe o mere ma oburu na ihe nlere anya gi di ebube ma oburu na foto nke ya na ya adighi adi nma. Kwesiri ịse foto mara mma nke ukwuu maka nke a enwere ndụmọdụ bara uru dịka iji ndabere na-anọpụ iche (ọkacha mma na-acha ọcha), mbadamba ihe eji emepụta ọhụụ na nke na-enye aka pụrụ iche. N'ezie, cheta mgbe niile na nhazi ga-abụrịrị onye protagonist nke foto ahụ.
Tinye akara mmiri na aha blọọgụ gị na foto ndị ahụ. Nke a ga - enyere ndị na - agụ akwụkwọ gị aka icheta weebụsaịtị gị ma n’otu oge gbochie weebụsaịtị ndị ọzọ iji ha mee ihe n’enyeghị gị ikike.
Soro a otu ụkpụrụ iji see foto niile (nha ndị yiri ya, nwechara agba dị iche iche, wdg) ka ndị ọrụ gị mata ụdị gị.
tinye otu foto nke nri agwụla na mmalite nke nhazi. Mgbe ahụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nwere ike itinye foto dị n'ime ya na usoro etiti ị ga - agbaso, mana foto izizi nke onye na - agụ ya na - ahụ mgbe niile ga - abụrịrị nke nhazi emechara.
Nye nke gị onye aka ka uzommeputa. Na ịntanetị enwere ọtụtụ puku Ezi ntụziaka ka ị nwee ikeiche onwe gị, ị ga-agbakwunye ndị na-agụ akwụkwọ gị uru. Nye efere ọ bụla mmetụ pụrụ iche gị ma ị ga - enweta ndị na - eguzosi ike n'ihe nke ga - agụ gị kwa ụbọchị.
Jiri nke a mechie ụda. Ndị na - agụ akwụkwọ gị bụ ndị enyi gị, gwa ha okwu dị ka a ga - asị na ha bụ ndị enyi na - ebi ndụ nwere olu na - ekpo ọkụ. Ha ga-enwe ekele maka ya!
Ma nke ahụ niile !. Ugbu a, anyị nwere ike na-achọ gị jisie ike na blọọgụ ọhụrụ gị ma mee ka ị rụpụta ọtụtụ ihe ịga nke ọma.